Kareena Kapoor Khan oo naqshadeeyaheeda dhanka Style-ka ku amartay inuu Sara Ali Khan – Filimside.net
Kareena Kapoor Khan oo naqshadeeyaheeda dhanka Style-ka ku amartay inuu Sara Ali Khan
July 11, 2018 Zakarie Abdi
Kareena Kapoor Khan fanka Hindiya 18-sano ayay ku jirtaa sidoo kalena dhanka Style-ka iyo xarakaadka laguma gaaro marka ay shaashada kasoo muuqato ayadoo heesato naqshadeeyayaal dhanka Style-ka siweyn uga hagaan.
Sidaa darteed Kareena ayaa ku amartay naqshadeeyaheeda dhanka Style-ka inuu la shaqeeyo Sara Ali Khan waana gabadha ay Kareena eedo u tahay madaama uu aabo u yahay seygeeda Saif Ali Khan.
Naqshadeeyaha dhanka Style-ka Pompy wuxuu la shaqeyn doonaa Sara Ali Khan asigoo ka hagi doono dhanka Style-ka filimkeeda Simmba.
Kareena ayaa u sheegtay Pompy inuu Sara garab taagnaado xili walbo inta shaqada filimka Simmba socoto madaama filimkan mid xarako uu yahay lana jileyso Ranveer Singh halka Rohit Shetty uu Director ka yahay.
Kareena Kapoor waxay sheegtay in Sara ay saaxiibo dhow yihiin sidoo kalena xiriir waalid uusan ka dhaxeynin balse xiriir saaxiibtinimo ka dhaxeeyo sidoo kalena ay dooneyso in Sara ay xarakaadka iyo labiska Bollywood-ka ku qabsato.
Waxaa Aqrisay 1,308